Sitshintsha ihlabathi phantsi kwamandla onke asemantombazaneni - kwaye isiqingatha esihle sabantu siyazi malunga nayo. Ukugqithiswa kweenwele ezintsha, umbala obolileyo obunwele kunye nomfanekiso oqingqiweyo unokutshintshela ngokukhawuleza ubomi kwiidrayili ezintsha. Umzekelo ibali leenkwenkwezi zaseRussia uPolina Gagarina. Ulahlekelwe iikhilo ezingama-40 zesisindo, ukusuka kwintombazana enesibhakabhaka e-brown "ebhokisayo" yaba yinto ebulalayo. Utshintshile umfanekiso - kunye nempumelelo kuyo yonke imisebenzi ayizange ithathe ixesha elide. Emva kwe-Eurovision-2015 ihlabathi lonke liyazi ukuba ngubani uPolina Gagarina. Umyeni womculi weefrethi uDmitry Iskhakov onyakeni wesibini ngumqhubi wakhe obaluleke kakhulu, evakalisa ngokukhawuleza kwilizwe lonke: "Akukho nwaba ngakumbi kunokuba ubone indlela uPolina amomotheka ngayo."
UPolina Gagarina kunye nomyeni wakhe uDmitry Iskhakov
UPolina Gagarina kunye nomyeni wakhe wokuqala uPeter Kislov: luyintando yokwenene kuphela ebomini kuphela?
Ngomlingani wokuqala womlingani uPeter Kislov, umculi wokuqala wadibana noxa efunda kwi-Moscow Art Theatre School. Intombazana enomdla uPetya, umfundisi oncedisayo u-Igor Zolotovitsky, ngokukhawuleza wabeka iliso kumfundi onetalente kwaye, ngaphandle kokucinga ixesha elide, wavula intliziyo yakhe kuye. Inveli yabantu bobugcisa yayigcwele ukutshisa nokutshatisa. UPolina akazange aqiniseke: nguPetros owayenguye kuphela kunye nomntu ozahlukileyo, ozayo kunye noyise wabantwana bakhe.
UPolina Gagarina kunye nomyeni wakhe wokuqala uPeter Kislov
Le ntombazana yayingenamahloni ukuba wakhethayo wayesetshatile, eyayihlala iinyanga ezisixhenxe kuphela. Ngomnye umfazi uSilova - inkwenkwezi ye-movie u-Anastasia Makeyeva - emva kokuqhawula umtshato, engafihlekanga umxhelo, wamisela umyeni wakhe owayengumyeni ngodaka, wambiza ngokuthi "ibhokhwe" kunye "notywala".
UPyotr Kislov kwifilimu "iSect"
Ngo-2007, naphezu kweendlebe ezimbi, umtshato omhle ovulekileyo wenziwa-uPeter Kislov noPolina Gagarina baba ngumyeni nomfazi. Umtshakazi wayenenyanga yesixhenxe yokukhulelwa ngosuku olubalulekileyo. Ngo-Oktobha 14, unyana kaAndrei wazalelwa intsapho yakhe. Ubaba osemncinci akazange ashiye umntwana wengane kwiinyanga ezimbalwa zokuqala. Ngomyeni onomdla kangaka, impilo kaPolina Gagarina yayinomdla, kodwa ngenxa yolonwabo ngokupheleleyo bethu amaqhawe babengenabo ubulumko kunye nomonde. Abazali abatsha abatshabalalise, baxhatshaza, banqabile kwaye banenkani. Bobabini babethandwa kwiinkwenkwezi. Ngo-2010, isibini saqhekeza ngenxa yesizathu esincinci - "abazange bahlangane". Umntu owayesakuba ngumyeni kaPolina Gagarina ngoku uthetha ngomama womntwana wakhe ngesisa kwaye uyonwabile: "Ndandisoloko ndiyazi ukuba uPauline nguye ongcono." Umdlali weqhawulo lomtshato kunye nomfazi wakhe wesibini uyazigxeka yena ngokwakhe, mhlawumbi, ngokufihlakeleyo uyaqhubeka ekuthandeni umnqweno owonwabileyo. Ngendlela, iifoto zomyeni wokuqala kaPolina Gagarina kunye namanye amantombazana atholakala kwiwebhu kakhulu.
Umtshato kaPolina Gagarina noPyotr Kislov
UDmitry Iskhakov - Indoda yesibini kaPolina Gagarina: "Ubudlelwane bubaluleke ngaphezu kweengxabano"
UPolina Gagarina waguqula umfanekiso wakhe emva kokuqhawula umtshato. Umama osemncinci wamlahla amakhilogremu angaphezulu, watyhila iinwele zakhe ngothando "olunqabileyo" waza wenza inwele emfutshane. Ngoku ekhanda lomculi unako ukubona imfashini "yokukhwabanisa", kodwa ebomini bakhe - yonke into ihamba kakuhle kwaye ingenakulungiswa. Utshintsho luya kuPauline ngokulungileyo.
UPolina Gagarina: ngaphambi nangemva kokulahlekelwa ubunzima
Ngomyeni wakhe wesibini uDmitry Iskhakov, uGagarin wadibana nenye yeentsuku zokusebenza. I-photographer enobuhle yayijongene nomnye weefotohoots zomculi. Ngethuba besetyenziselwa iifom zangaphambili, abaza kutshata bengazange babelane ngothando. U-Iskhakov wayengazi nantoni na ngomsebenzi kaGagin kwaye wayiphatha njengomzekelo oqhelekileyo. UPauline wayekhathazekile ngokuqhawula umyeni wakhe wokuqala, uPeter Kislov, kwaye akazange acinge ngento entsha entsha.
UPolina Gagarina kunye nendoda uDmitry Iskhakov
Iifoto ezithathwe nguDmitry Iskhakov zenziwe zihle kakhulu. UPolina wanquma ukuba kuya kuba yile ngcali kuphela ukuba athathe imifanekiso yeefowusta zakhe. UDmitry, ukucwangcisa isithunzi seenkwenkwezi encinane, wazibamba ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba asebenze nomfazi omhle kakhulu. Kamva, abadumileyo bakwazi ukuwela iixesha eziliqela kwiWebhu Yehlabathi. Emva kwenkcazelo encinane kwinethiwekhi, umculi nomfoto wezithombe bagqiba ngomhla wokuqala. Intlanganiso engaqhelekanga phakathi kukaPolina kunye noDmitry wayenothando kunye nothando, kodwa emva kweentsuku ezimbalwa umculi othandwayo wayelindele ukhenketho.
UPolina Gagarina kwinqanaba
UDmitry Iskhakov kuyo yonke ihambo ehamba kunye noPauline - indoda yajika yaba "ngumqhubi womntu" womculi. Abathandi baqaphela ngokukhawuleza ukuba xa behamba phantsi kwenyanga banenkqubela emfutshane. Baqeshisa indlu - kwaye, ngokugqithisa ixesha le-candy-bouquet, baqala ukuhlala kunye. Ngowe-2014, umculi wezithombe ezidumileyo wayenza uPauline kwiBridge Bridge yabathandi. Umtshato othandwa ngabantu abathandekayo bahloniphekile eMoscow, kunye ne-honeymoon engalibalekiyo esetyenzisiweyo kwiSychelles. Iifoto zomtshato kaPolina Gagarina zikhangeleka.
Ifoto yomtshato kaPolina Gagarina noDmitry Iskhakov
Kwi-intanethi, iqabane leenkwenkwezi liye lavuma ukuba akukho nto ingavumelaniyo kwiintsapho zabo. Umculi akwazi ukupheka aze ahlale ekhonsathi. Umfaki-zithombe akaqondi nantoni na kumculo aze ahlangane ngeveki ngeephotomodels ezikhohlisa. Nangona zonke iintlukwano phakathi kwabatshatileyo, kwisibini sesibini sinoxolo uxolo kunye nokuvisisana.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano ze-biography kaDmitry Iskhakov
Kubamangalisa ubugcisa bomculi, kwaziwa ukuba ngubani umyeni kaPolina Gagarina, kodwa abalandeli bafuna ukwazi okungakumbi ngaye. Uhlobo luni lomntu? Yintoni ephawulekayo malunga nomzobo womyeni wakhe uGagarina? Uneminyaka emingakanani? Ngubani umyeni kaPolina Gagarina ngohlanga? Ngaba ufanelwe ngu-Queen of Eurovision 2015?
Inkosi yabasebenzi abahlakaniphile ineminyaka engama-38 ubudala. Ukususela kwiminyaka eyi-17 wahlala kwaye wasebenza eJamani. Kwamanye amazwe, uDmitri wasebenza kuqala i-pizza-jolo, waza wanyuswa kunye noyilo waza waqala ukwakha umsebenzi kwi-arhente yokukhangisa. Emva kokudinwa "ngonxibelelwano" olungapheliyo kunye nekhompyutha, u-Iskhakov wathenga ikhamera. Phakathi kwamakhasimende akwaDmitry kukho abaninzi bezopolitiko abaziwayo, oomashishini kunye nabameli bezorhwebo. Iskhakov akaziwa nje ngokuba ngumfaki-zithombe, kodwa nje ngokuba ngumfazi wesanta kunye nentliziyo. Wakha ubudlelwane noRenata Litvinova ngokwakhe waza wadibana noRavshana Kurkova. E-Polyn Gagarin yajika yaba yimizimba kunye nobungqingili bendoda eshushu. Inkwenkwezi yenkwenkwezi yabanye abafazi ngoku ayiboni.
UPolina Gagarina noDmitry Iskhakov
Unyana kaPolina uGagarin Andrey ukhula ngothando. Iifoto ezisuka kwingqolowa yosapho, imfihlelo yemfundo evela kumama weenkwenkwezi, inzondo yenkwenkwe. Umntwana wengoma ethandwayo iminyaka elishumi. Esi sithombeni indodana kaPolina Gagarina ibonakala ijabule kwaye iyonwabile. Umntu ohlakaniphile uchitha ixesha elininzi kunye noyise uPeter Kislov - umyeni wokuqala kaGagarin - edlala naye kwimidlalo yekhompyutheni, ebuka ibhola, "ephuka" ekuhambeleni ukuhamba. Ngomntakwabo, uAndreya naye, akukho nto ingavumelaniyo. Ngomhla wokuqala wokudibana kwakhe noDmitry Iskhakov, inkwenkwe yenkalipho yathi umyeni omtsha unina wayeyindoda enengqiqo. U-Andrew wabuza wabuza umama wakhe: "Ngaba uthenge i ring?". Uva nje nge-Instagram uPolina Gagarina wabelane nabanini ababhalisile bezithombe zentsapho ezintle zibonisa ukuba nayiphi na ubaba, ukuba unqwenela, unokumisela ubudlelwane obufudumele kunye nomntwana onyana.
Intsapho kaPolina Gagarina (umyeni nomntwana). Ifoto esuka ku-Instagram
UPolina Gagarina uyavuma ukuba akwazi ukuba ngumama oqinileyo. Akazange athukuthelele umntwana kwaye amjezise ngenxa yokuziphatha kwakhe kakubi. UGagarina ukholelwa ukuba abazali kuba bantwana babo kufuneka babe ngabahlobo abalungileyo. Ngoku u-Andrey uneshedyuli eqinile "yokusebenza". Umfana uya esikolweni ngokufunda ngokujulile isiNgesi, angena kwimidlalo, ufunda ukudlala ipiyano. UPauline uyaqaphela ukuba unyana wakhe uhlabelele italenta kunye nezakhono zobomi. U-Andrei akayaphupha malunga nesigaba - inkwenkwe iphupha malunga neeplani kwaye kwixesha elizayo lihlose ukuba ngumqhubi obalaseleyo.
UPolina Gagarina kunye nendodana yakhe uAndrey
Iindaba zakutsha malunga nePolina Gagarina: ubomi bomntu kunye nempumelelo emsebenzini
Ngoku uPolina Gagarina uphuhlisa indlu entsha esentliziyweni yaseMoscow. Umntu owayengumdlali othabatha umdlalo we "Factory" uye waba ngumqeqeshi onobuchule kwi-"Voice". Kungekudala, umculi wakhulula i-albhamu entsha ngegama elingavamile "9". Ngolunye usuku uPauline watyhila umkhondo othungelayo "Dansa kunye nam" kwaye wamema wonke umntu ukuba ajoyine le vidiyo kule nxalenye yokuqhuma. Indlela yokuhambisa ingoma evuya, uPolina Gagarina wabonisa ngomzekelo wakhe. Kwi-intanethi, abalandeli banokubona i-video yomdaniso oshisayo womculi kunye nendodana yakhe u-Andrew.
UPolina Gagarina udansa kunye nendodana yakhe u-Andrey
Ukufezekisa ezi njongo kunye nenkani enokuthi, mhlawumbi, nguPauline Gagarin kuphela. Umyeni uDmitry Iskhakov uyaziqhenya ngeendaba zakutsha zeqabane kwaye uhlala emncoma esidlangalaleni kwiphepha elilandelayo kubomi bakhe bokudala. Isimo sengqondo esithintekayo sesigxina sesibini sivuselela umculi kwaye sinike ukholo kuye kwikamva elonwabileyo.
Ucinga ukuba ngubani osesithombeni? Namhlanje, lo ngumdlali ogqwesileyo wesidlo saseRussia
Indlela uCatherine Barnabhas ishintshile ngayo: ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kweplastiki
Kutheni uRavshana Kurkova engatshatanga
Indlela yokulungisa kakuhle ikhabethe yakho?
Isaladi kwi-radish eluhlaza
"I-bhamamin ibhomu" evela eOlga Orlova: iresiphi yesibalo esincinane esivela kwi-soloist "
Indlela yokuvuyisa ekwindla
Iipancakes kunye nesibindi sesilwanyana
Iibisiki zentenge nge-chocolate
Yintoni ekhokelela ekuzingca nasekuthandeleni?
Kuthekani ukuba unesizungu?
Ukuhlwa ngokuhlwa kwamarheads
Iipropati ezisebenzayo zesepha yokuhlamba
Izidlo zemifuno nezithelo
Ioli ehlanjululwayo engafanelekanga